संसदमा माधव नेपालकाे कडा प्रश्न : कता हराए गृहमन्त्री ? – Himalaya TV
Home » समाचार » संसदमा माधव नेपालकाे कडा प्रश्न : कता हराए गृहमन्त्री ?
संसदमा माधव नेपालकाे कडा प्रश्न : कता हराए गृहमन्त्री ?
११ आश्विन २०७५, बिहीबार १५:१८
काठमाडौं, ११ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स‌ंसदमा बाेल्दै गृहमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ ?, गृह प्रशासन छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्न उठाएउनुभएकाे छ । मुलुकमा ‘बलात्कार, एसिडबाट आक्रमणजस्ता आपराधिक घटना बढ्दै गएकाे र त्यसकाे नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयाे ।
अनेकौं यस्ता घटना घटेका छन्, भ्रष्टाचार बढेको छ, रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने अंग छ कि छैन, कोही गिरफ्तार भएका छन् कि छैनन्’ उनले भने ‘जनता परिणाम हेर्न चाहन्छन् ।’
‘खुलेआम देशलाई टुक्र्याउने व्यक्ति छन् । त्यस्तालाई देशभित्रैकाले साथ दिइरहेकाे नेपालले अाराेप लगाउनुभयाे ।
अहिले सांसदहरुले पनि लाज मानेर र शीर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपालकाे भनार्इ थियाे । ‘बाटाघाटामा हिँड्दा, बसमा हिँड्दा के भन्लान्, पैदल हिँड्दा के भन्लान्, पसलमा छिर्दा के भन्लान् ?’ नेता नेपालले भने ‘ अर्को अधिवेशनमा आउँदा शीर ठाडो हुने गरी आउन पाइयोस् ।’
भ्रष्टाचार गर्ने र ठेक्कामा ढिलासुस्ती गर्ने र कालोसूचीमा परेकाहरु नै पुरस्कृत भइरहेको भन्दै उनले तिनीहरुलाई पटक-पटक जिम्मेवारी दिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।
अहिलेसरकारमाथि जनताको आशा र विश्वास रहेको र सरकारले काम गरोस् भन्ने चाहना रहेको नेता नेपालले बताउनुभयाे । ‘यो सरकारले राम्रो काम गरोस्, भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर होइन नगरेर देखाउनुपर्छ । छोराछोरी, पीए नातेदार विभिन्न च्यानल मिलाएर यस्ता कहिँ कतै छन् भने अन्त्य होस्,’ उनले भने ।